MYSTERY ZILLION တွင် English သို့မဟုတ် Unicode ဖြင့်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ဇော်ဂျီ ၊ ဧရာ စသည်တို့ကို အသုံးပြုခွင့် မရှိ။ Unicode fonts များမှာ Mon3,Yunghkio, Myanamr3 စသည်များ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Unicode Guide ကို ဒီမှာ Download ချပါ။ Zawgyi to Unicode ConverterDon't share ebook or software if nobody request. You can find free book websites on here. We are welcome for discussion or asking question instead.MYSTERY ZILLION
နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာများ
ဆွေးနွေးချက် 2,975 ခု
22,415 မှတ်ချက်များMost recent: use in USB by superior4:24PMဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Antivirus & Virus, Internet & Email, DTP, Internet Security, quiz, IT Debates, Help Desk
Forum နဲ့ပတ်သက်ပြီး မသိတာရှိလျှင်မေးရန်။ forum နဲ့ ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများသာ
ဆွေးနွေးချက် 757 ခု
8,339 မှတ်ချက်များMost recent: Using markdown at forum by saturngodDecember 11ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : MZ News, MZ Blog, Project, Idea
member များ MZ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးရန်။ ဥပမာ တွေ့ဆုံပွဲ ၊ seminar ...
ဆွေးနွေးချက် 1,281 ခု
13,847 မှတ်ချက်များMost recent: how to appear data Datagridview to Co… by htethtet29January 1ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Intro Myself, မသိမဖြစ်, Members Showcase, MZ's Pick, Reader's Pick, Job Vacancy, My Article
Programming ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး General ကျတဲ့ အပိုင်းတွေ ဆွေးနွေးကြမယ်။
ဆွေးနွေးချက် 355 ခု
2,561 မှတ်ချက်များMost recent: Microsoft စာမေးပွဲဖြေချင်လို့ပါ။ ကူညီကြ… by AnceSicaDecember 11ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : C++, C#, Python, Java, VB.NET, VB6, Theory And Data Structure, XML
ဆွေးနွေးချက် 429 ခု
CMS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆို ဆွေးနွေးမယ်..
ဆွေးနွေးချက် 182 ခု
1,360 မှတ်ချက်များMost recent: Online Shooping Cart Website by CalmHillAugust 5ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Joomla, Wordpress, ModX
Mobile App Development နဲ့ ပတ်သက်၍ ပြောဆို ဆွေးနွေးရန်
ဆွေးနွေးချက် 101 ခု
490 မှတ်ချက်များMost recent: Mobile App(iOS and Android) Development… by CalmHillJune 25ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : iOS Devlopment, Android Development, WP7Development, other mobile
mobile နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆို ဆွေးနွေးရန်
ဆွေးနွေးချက် 671 ခု
3,533 မှတ်ချက်များMost recent: တရုတ်မ Spreadtrum SC6820a 2.0Ghz ကိုRoo… by fidel-jawgyiAugust 5ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Symbian, Windows Mobile, Android, iPhone, iPad
Linux အကြောင်း Unix အကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ်
ဆွေးနွေးချက် 356 ခု
2,900 မှတ်ချက်များMost recent: How to get meterpreter by zawsanminMarch 14ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Ubuntu, Fedora, Linux Server
Graphic Design များနှင့် သက်ဆိုင်သော
ဆွေးနွေးချက် 178 ခု
1,221 မှတ်ချက်များMost recent: မြန်မာ ယူနီကုတ် ဖွန့်များကို ဖန်တီးလိုပ… by saturngodJuly 17ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Photoshop, 3D Max, Maya, Flash, AutoCAD
Software လေးတွေ သူများနဲ့ Share လုပ်ခြင်တာတွေဒီမှာ ပေးကြမယ်။
ဆွေးနွေးချက် 1,162 ခု
12,782 မှတ်ချက်များဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Tech News, Rapidshare Account, File Request, ဖတ်စရာ, Computer Humor
ဆွေးနွေးချက် 175 ခု
881 မှတ်ချက်များMost recent: CDMA 800, ၅သိန်းတန် 250000 by ဇင်ဝေNovember 21ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Desktop PCs, Apple Sale, Laptops & Notebooks Sale, Book Sale, Network Accessories Sale, Drives & Storage, Accessories
web ပေါ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ software လေးတွေပေါ့
ဆွေးနွေးချက် 177 ခု
1,230 မှတ်ချက်များMost recent: Hosting Server ကောင်းကောင်း သိချင်ပါတယ်။ by saturngodJuly 10ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Blog, Blogspot
Windows နဲ့ဆိုင်တာလေးတွေ ပြောကြမယ်။ မေးကြမယ်။
ဆွေးနွေးချက် 591 ခု
3,702 မှတ်ချက်များMost recent: Firefox Error: by superior4:40PMဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server
Apple Mac နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးရန်
ဆွေးနွေးချက် 37 ခု
198 မှတ်ချက်များMost recent: Mac ရဲ့ MS Word မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် မပေါ်… by dayOctober 20
Open Source Project များနှင့် ပတ်သက်၍
ဆွေးနွေးချက် 31 ခု
MSSQL,MySQL စသော Database များအကြောင်းဆွေးနွေးရန်
ဆွေးနွေးချက် 84 ခု
771 မှတ်ချက်များMost recent: DESC problem by CalmHill3:52AM
Hardware ပြသနာတွေ ၊ Hardware အကြောင်းတွေ ပြောမယ် ဆွေးနွေးမယ်
ဆွေးနွေးချက် 252 ခု
1,747 မှတ်ချက်များMost recent: HP Pavilion Entertainment PC by KNovember 1ဆင့်ပွား အမျိုးအစားများ : Printers & Scanner
Networking အကြောင်းလေး ဆွေးနွေးမယ်
ဆွေးနွေးချက် 502 ခု
4,035 မှတ်ချက်များMost recent: Wireless Problem by TunTunMyintNovember 28
ဆွေးနွေးချက် 69 ခု
276 မှတ်ချက်များMost recent: USB, HDD LLF Low Level Format Tool 4.12 by kokyawgyiAugust 2012
Computer နဲ့ ပတ်သက်သော အထွေထွေပြသနာများကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...
ဆွေးနွေးချက် 1,339 ခု
9,515 မှတ်ချက်များMost recent: Difference between ZawGyi 2007 vs 2008 by saturngodDecember 1